कांग्रेस प्रवक्ताले हेरे 'घामड शेरे'
प्रकाशित : बिहिबार, कार्तिक २१, २०७६२३:१०
देश । पछिल्लो केहि दिन यता फिल्म ‘घामड शेरे’ विवादित बन्दै आएको छ । फिल्मको पोस्टरमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तस्वीर राख्दै ट्रोल बनाएपछी त्यो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बन्यो । यद्दपी त्यसमा निर्माण पक्षको कुनै संग्लगनता नरहेको निर्माण टिमले प्रस्ट्याइ सकेको छ । साथै , त्यसले कसैलाई ठेस पुर्याएको भए आफुहरु माफी माग्ने समेत निर्देशक हेमराज बिसीले बताईसकेका छन् । यससँगै रिलिजको पुर्व सन्ध्यामा आयोजना गरिएको प्रिमियरमा ‘घामड शेरे’ लाई नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले हेरेका छन् ।
बिहीबार साँझ ट्वीट गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले उक्त फिल्म गलत `सिस्टम´ का विरुद्ध लड्ने पात्रको कथा रहेक जनाएका छन् । ‘असम्बन्धित व्यक्तिले पोस्ट गरेको तस्बिरलाई लिएर फिल्म या फिल्म युनिटसँग कोही पनि उत्तेजित हुन जरूरी छैन । निर्देशक, कलाकार र सिंगो टिमलाई शुभकामना!’ शर्माले लेखेका छन् । उनलाई वुधवार मात्र निर्देशक बिसीले फिल्म हेर्न आग्रह गर्दै सार्वजनिक भइरहेको ट्रोलमा आफ्नो टिमको कुनै पनि किसिमको संलग्नता नरहेको प्रस्ट्याएका थिए ।
फिल्म `घामट शेरे´ का सम्बन्धमा !
गलत `सिस्टम´ का विरुद्ध लड्ने पात्रको कथा रहेकोे फिल्म भोलि २२ कार्तिकबाट प्रदर्सन हुन लाग्दैछ l असम्बन्धित ब्यक्तिले पोस्ट गरेको तस्वीरलाई लिएर फिल्म या फिल्म युनिटसंग कोहिपनी उत्तेजित हुन जरुरी छैन l
निर्देशक,कलाकार र सिंगो टिमलाई शुभकामना !
— Bishwa Prakash शर्मा (@bishwaprakash77) November 7, 2019
फिल्ममा एक किसानले प्राकृतिक विपतले भोग्नु परेको समस्यालाई देखाइएको छ । पछिल्लो समय सरकारी कर्मचारीले गर्ने सानो लापरवाहीले एउटा किसानको खेत बगाउदा पर्ने पिडालाई फिल्ममा देखाइएको हो । फिल्मका लिड कलाकार अर्थात् शेरे निश्चल बस्नेतले यसमा घामड व्यक्ति चरित्र निर्वाह गरेका छन् । फिल्मममा निश्चलको अपोजिटमा सुष्मा निरौला र स्वस्तिमा खड्का छिन् ।
सुष्मा श्रीमतीको भूमिकामा छिन भने स्वस्तिमा सालीको । फिल्मको अधिकांश छायांकन सुर्खेतमा भएको छ । फिल्ममा निश्चल एक किसानको भूमिकामा छन् । उनले आफ्नो जीवनमा आउँने बाधा-अड्चनलाई कसरि जित्छन , फिल्मयसमै केन्द्रित रहेको छ । निर्देशक बिसीको होम प्रोडक्सन कम्पनी बिसी मोसन पिक्चरको ब्यानरमा यो फिल्म निर्माण भएको हो । नरेन्द्र मैनालीले फिल्म खिचेका हुन् ।
लेडी र किमले छाडे घर
५१ रुपैयाँ पारिश्रमिकमा तयार हुँदै ‘रङ्ग भित्रको उजाड जिन्दगी’
स्पाइडर म्यानको ट्रेलर हेर्न ‘एण्डगेम’ हेर्नु पर्ने ? (भिडियो)
विवाह अगाडी ‘हेल्लो जिन्दगी’